? => O2 (အောက်ဆီဂျင်) | Chemical Equation Balancer
? = O2 | ဓာတုညီမျှခြင်း Balancer
? = အောက်စီဂျင်
322 ရလဒ်များ တွေ့ရှိရ
ကယ်လစီယမ် oxychloride အောက်စီဂျင် ကယ်လစီယမ်ကလိုရိုက်
(chấtbột) (khi) (rn)
(ဘာသာပြန်ချက်၊ xpp) (khôngmàu) (trắnghoặckhôngmàu)
ညီမျှခြင်း 2CaOCl ၏ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ2 → အို2 + 2CaCl2
CaOCl2 (calcium oxychloride) ၏ တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေကား အဘယ်နည်း။
အပူချိန်: အပူအအေး အရည်ပျော်ပစ္စည်း: CuO သို့မဟုတ် Fe2O3 အခြားအခြေအနေ အလင်း
O2 (အောက်ဆီဂျင်) နှင့် CaCl2 (calcium chloride) ကို မည်သို့ တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
CaOCl2 (calcium oxychloride) ပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်
အလင်းသို့မဟုတ်အပူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်တွင်ကြေးနီအောက်ဆိုဒ် (သို့) သံအောက်ဆိုဒ်ပါသောထုံးကလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက်ကိုဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်အောက်ဆီဂျင်နှင့်ကယ်လစီယမ်ကလိုရိုက်ကိုဖန်တီးရန်ထုံးကလိုရိုက်ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်သည်။
ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ 2CaOCl နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်မေးခွန်းများ2 → အို2 + 2CaCl2
ဓာတ်ပြုနိုင်သော CaOCl2 (calcium oxychloride) နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ
CaOCl2 (calcium oxychloride) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ CaOCl2 (calcium oxychloride) ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတ်ပြုမှုအဖြစ် အဘယ်နည်း။
O2 (calcium oxychloride) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် O2 (အောက်ဆီဂျင်) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် CaCl2 (ကယ်လ်စီယမ်ကလိုရိုက်) နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
CaCl2 (calcium oxychloride) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ CaCl2 (calcium chloride) ပါ၀င်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။